> Resource > Beddelaan > BDMV Converter: Sida loo Beddelaan BDMV in AVI, MP4, MOV (Quicktime) iwm
Maqaalkani waxa uu inta badan diiradda ku saabsan sida loo badalo files BDMV in AVI, MP4, MOV (QuickTime) iyo ku dhawaad ​​kasta oo kale oo caan ah, heerka qaabab video on Windows iyo Mac. Xalku waa in la isticmaalo a BDMV Converter smart - Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan u folder BDMV ka taariikhqorihii camera AVCHD iyo Blu-ray filimada la file .mts / .m2ts kordhin.
Qeybta 1: Best BDMV (camera) Converter
Qeybta 2: Free BDMV Converter
Qeybta 3: Converter Online BDMV
Qeybta 4: dheereeyey aqoon u files BDMV
Qeybta 1: Best BDMV Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan BDMV (camera) si MKV, AVI, MP4, MOV (Quicktime), iwm in tayada wax soo saarka sare.
• si toos ah loogu badalo in ay iPhone, iPad, Samsung, HTC, TV, iwm
• xawaaraha diinta Superior badan oo dhan converters ku saabsan suuqa.
• shakhsiyeeyo video si waafaqsan rabitaanka la muujinta tafatirka classic.
• Ku dar metadata (cover filim, sharaxaad, comment, actor iyo agaasimaha magaca, iwm si aad videos.
Beddelaan inay Devices
Iyadoo presets filaayo in qalabka kala duwan, waxaad si toos ah aaladaha aad u dhiganta badalo kartaa adiga oo aan ka fiirsaneysa waxa format waxaa taageera qalabka aad, samaynta aad ku raaxaysato videos on go ah.
Taageerada Qaabka kasta
Tani Converter BDMV kuu ogolaanaysaa inaad soo dhoofsadaan files warbaahinta in qaab kasta oo kale ama MTS M2TS, ka dibna si deg deg ah u badalo si AVI, MKV, MP4, QuickTime MOV, iwm la AAN tayada khasaaro. .
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed
Ma doonaysaa in aad kaamil video hor diinta kasta? Soo qaado tan Converter BDMV si aad movie gaar ah by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan ama saamaynta si aad video.
Haddii aad raadinayso file Converter BDMV la xawaaraha sare ee shaqada? Codsiga waxa uu noqon doonaa doorashada ugu fiican ee aad. Kaliya Waxaad dareemi karo oo lacag la'aan ah si loogu badalo aad files BDMV (camera) in dhawr miridh.
Sida loo isticmaalo Video Converter Ultimate
Hagaha hoos ku qoran waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo BDMV on Mac, kaliya aad u hesho tutorial ah halkan .
1. Ku dar files MTS / M2TS galka BDMV
Guji "Add Files" button ee "Beddelaan" interface ay ku darto oo aad MTS / M2TS videos. Ama si toos ah jiidi oo hoos u faylasha MTS / M2TS ka folder BDMV in app this. Ka dib markii in, kuwaas oo files ku daray in la soo bandhigi doonaa sida thumbnails in this app ee Murayaad bidix.
Wakhtigan, aad magaca karaan faylasha aad, ama qabsadaan si qaab beddelidda, ama guji thumbnails video in ay iyaga ku eegaan. Waa maxay dheeraad ah, haddii aad rabto inaad ku biirto dhammaan faylasha dhoofiyo file weyn, kaliya sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" doorasho hoose ee interface ka.
2. Dooro qaab wax soo saarka sida AVI, MP4, MOV (QuickTime), iMovie iwm ah
In liiska qaabka wax soo saarka, app ku jira qaabab video ku dhowaad dhammaan caanka ah sida AVI, wmv, MP4, MOV (QuickTime), FLV, VOB, MKV iwm Sidoo kale, oo badan-goobaha pre filaayo in qalabka kala duwan iyo codsiyada sida iPhone, iPad , PSP, iMovie, FCP iwm lagu daro. In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay inaad doorato qaabka aad rabto in aad wax soo saarka ah.
Hadda, waxaan soo qaadan doonaa AVI tusaale ahaan. Hit image qaabka guddiga Qaabka Output ee interface ugu weyn, ka dibna, u tag "qaab"> "Video"> "AVI" qaab suuqa kala pop-up ah.
Fiiro Gaar ah: Tani Converter BDMV kale oo ay bixisaa function tafatirka awood leh, kaas oo awood kuu inay xaalkaa faylasha aad si aad u dhadhan gaar ah ka hor inta uusan qaab beddelidda, sida abuurka ama falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamayn, watermark, iyo subtitles, iwm
Riix badhanka "Beddelaan" inuu ku soo bilowdo ka folder BDMV diinta MTS / M2TS in qaabka aad rabto. Markii diinta la sameeyo, waxaad riixi kartaa "Open Folder" in la furo gal meesha files wax soo saarka ayaa la badbaadiyey.
Video Tutorial: Sida loo isticmaalo Video Converter Ultimate
Qeybta 2: fursado dheeraad ah: Free BDMV Converter
Waxaad isticmaali kartaa tan BDMV file Converter oo lacag la'aan ah si fudud loogu badalo BDMV in AVI, MKV, MP4, iwm
Pro: 100% free video Converter, fududahay in la isticmaalo.
1. Qaab file saarka waa uu xaddidan, HD iyo videos 3D ma taageersana.
2. Waxaad ma isticmaali kartaa si toos ah loogu badalo qalabka, sameynta habka diinta wax yar ka dhib badan.
3. The tayada wax soo saarka video ma aha in wanaagsan sida video Converter kama dambaysta ah.
Qeybta 3: Online BDMV Converter
Si aad si fiican u fahmaan file diinta BDMV ah, fadlan akhri waa waxa BDMV hore. Tani waxay samayn doonaan caawimo wayn aad u. BDMV waa nooc ka mid ah file macluumaadka, sida Blu-ray cajalid Movie Information Files. Waxaa jira BDMV format, taas oo ah qaab modified ee MPEG-2 il. The files BDMV hubaal taageerto waa sida soo socota:
• fayl AVCHD (BDMV iyo SHAHAADO) la .mts / m2ts soo gudbin kordhin ka kaamirada HD.
• movie Blu-ray la folder BDMV & SHAHAADO. In galkan, waxaa jira subfolder Stream ah, taas oo ka kooban file MTS ah gudaha.
• Blu-ray DVD movie leh qaab folder BDMV, iyo in galkan waxaa jira faylasha la .m2ts extention.
Download Video Converter Ultimate :
Sida loo soo bixi filimada MP4 ama videos for PSP, Android iwm